Axmed Madoobe oo markii ugu horeysay la kulmay Golaha Wasiirada cusub ee jubbaland (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa markii ugu horeysay kulan la qaatay Golaha Wasiirada cusub ee Jubbaland oo Bishan gudaheeda la magacaabay.
Xarunta Madaxtooyada Magaalada Kismaayo ayuu kula kulmay Axmed Madoobe oo ay wehliyaan Kuxigeenkiisa koowaad iyo labaad intaba.
Hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa Golaha Wasiirada cusub, wuxuu u sheegay in laga doonaayo shaqooyin adag inay qabtaan oo ku aadan xilalka loo dhiibay.
Wuxuu sheegay muhiimada inay tahay Bulshada oo loogu adeego si cadaalad ah, iyadoo laga fogaanaayo eex iyo musuq maasuq lagu sameeyo shaqada loo haayo Bulshada.
Golaha Wasiirada cusub ee Jubbaland ayaa balan qaaday inay sameynayaan dadaal dheeri ah oo ku aadan shaqooyinka loo igmaday, islamarkaana ay la soo bixi doonaan dar dar cusub oo ku aadan hanaanka shaqada.
Waxa kale oo ay sheegeen inay muhiim tahay in deeganada ka maqan gacanta maamulka Jubbaland la xureeyo si deeganadaasi loo gaarsiiyo adeegyada Maamulka iyo shaqooyinka kala duwan.